Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Hadalkii Muuse Biixi wuxuu ahaa laba daran mid dooro! Xaglatoosiyena kiisu wuxuu ahaa ma anigana Fircoonow?!!! (weliba mowduucu kama madhna Video iyo muuqaalo xiisa leh).
Hadalkii Muuse Biixi wuxuu ahaa laba daran mid dooro! Xaglatoosiyena kiisu wuxuu ahaa ma anigana Fircoonow?!!! (weliba mowduucu kama madhna Video iyo muuqaalo xiisa leh).
Nov 29, 2015 ANALYSIS 0
“Garaad Saleebaan Garaad Maxamed maaha nin hadalkiisa layska indha tiro ama dhegaha laga furaysto, oo waxaan jirin laga soo qaado! Hubaalna waxa ah in ugu dambaynta hadalkiisii uun laysugu soo wada noqonaayo!! Sida hadaba muuqata oo wadahadaladii dowlada federaalka Soomaaliya iyo Somaliland qaab oday dhaqameed loogu bedelay! Shir deegaanada SSC
Ay beesha Caalamku ugu qabanayso magaalada Nayroobi ee dalka Kiinyana, waa loo diiday in wax siyaasiyiin ah oo maamulada ka socdaa ka soo qayb galaan, sida Khaatumo, Somaliland, Puntland iwm, bes waxa loo ogol yahay odayada dhaqanka iyo waxgaradka ay iyagu wataan si loo ogaado rabitaanka shacabka.”
“Beesha caalamku qaati ayay ka joogsadeen, oo hada aad bay uga soo horjeesteen beenta siyaasiyiinta Somalida, oo ay mudo shan iyo labaatan sano ah waxba ku kala socon waayeen!! Siyaasiyiinta Somaalidu waxay xalaalaysteen dhamaan wixii Allaah tacaalaa inaga xarimay, oo ay beentu ka mid tahay, waxay rabaan wax walba inay sharci daro, dulmi, cadaalad daro, ku been abuursho iwm ku marsiistaan, iyaga oo aan biyo u kabanayn in ay rabitaankooda guracan, ee sharci darada iyo cadaalad darad ah ku marsiistaan dhiig ay ku daadiyaan!!”
Xiligii uu socday ololihii doorashada Xisbiga Kulmiye ee Somaliland, waxan wada ogsoonahay in Muuse Biixi ahaa murashaxa madaxwaynanimo ee Xisbiga Kulmiye, oo uu gudoomiyihiisa yahay, madaxwayne ku-xigeenkana waxaa u tartamaayay madaxwayne ku-xigeenka hada ee Somaliland C/Raxmaan Saylici iyo Saleebaan
Xaglatoosiye wasiirka caafimaadka ee Somaliland, shacabka caadiga ah ee reer Somaliland, ee aan iyagu siyaasada waxba kala socon waxay 90% taageersanaayeen Saleebaan Xaglatoosiye, taas oo ay ka dambaysay caadifad iska laab lakac ah, iyo in ay rumaysteen been iyo marin habaabin, ay had iyo jeer masuuliinta Somaliland shacabka u
Sheegaan, siiba marka laga hadlaayo qadiyada deegaanada SSC, oo ay masuuliintaasu shacabka u sheegaan, in ay deegaanadaasu qabaan tabasho xaga awood qaybsiga ah, halka ay shacabka deegaanadaasuna qabaan, in aanay jirin wax tabasha ah, oo ay ka qabaan Somaliland, ee ay ku kala tagsan yihiin, oo iskaga soo horjeedaan qadiyada Gooni
Isu-taaga!! Iyo in ay ku andacoodaan xuduud uu beri gumayste samaystay, iyaga oo si ula kac ah isaga indha tira xiliyadii gumaystaha ka horaysay iyo xiliyadii ka dambayayba!! Waxa kale oo iyana Xaglatoosiye taageeray shakhsiyaadka Somaliland looga yaqaano Isxambaarada!! Isxambaaradu waa shakhsiyaad aan metelin bal se ka soo
Jeeda deegaanada SSC, kuwaas oo uu maamulka Somaliland u haysto in ay ku xoojiyaan sheegashadooda ah, in ay wada metelaan gobolada woqooyi ee Soomaaliya oo dhan!! Isxambaaradu waxay u taageereen Xaglatoosiye, oo dee iyaga ka mid ah, waa in doorkoodu ka dhex muuqdo Somaliland, oo ay madaxda sare ee maamulkaas ka dhex
Muuqdaan!! Si kastaba ha ahaatee dadka iyagu waaqiciyiinta ah, ee runta iyo siyaasada Somaliland xogoogalka u ah, may jeclaysan in uu Xaglatoosiye u tartamo mansabkaa, bal aad bay Xaglatoosiye ugala hadleen, oo ugala taliyeen, in uu arintaa ka tanaasulo, waayo waxay si fiican uga warqabaan, in hadii Xaglatoosiye loo doorto mansabkaa, in xisbiga
Kulmiye aanu wax shaki ah ku jirin in doorashada looga adkaanayo, hadaanu saaxadaba kaga bixin!! BAL se Saleebaan Xaglatoosiye waa nin aad u madax adag, guuldarada ama in doorashada laga helona aan aqbalin! Hankiisuna aad u wayn yahay, hase yeeshee aan caqliga ku salayn suuragalnimadeeda, oo hada ka hor Saleebaan Xaglatoosiye wuxuu isu
Sharaxay, lacag aad u farabadan ku bixiyay madaxwaynanimada Puntland, aad baa berigaa loogala taliyay, oo loo tusaalayay in Puntland waqti xaadirka ah ay awood qaybsi beeleed ku dhisan tahay, beeshiisuna ay leedahay madaxwayne ku-xigeenka, sidaas darteedna ay tahay, in uu madaxwayne ku-xigeen isu soo sharaxo, bal se taas wuu diiday
Intii hore oo dhan, ilaa uu maalmihii ololaha doorashada ugu damabaysay, uu yaqiinsaday in aanu doorashadaa ku soo baxayn, ka dibna uu ka tanaasulay, oo isu soo sharaxay madaxwayne ku-xigeen, taasna waa looga adkaaday, oo waxa ku soo baxay G. C/Samad Cali Shire, taas oo sababtay in Saleebaan Xaglatoosiye Puntlandba ka diga
Rogto!! In kasta oo uu madaxwaynihii Puntland ee doorashadaa ku guulaystay Dr. C/Raxmaan Faroole, uu wasiir culus u magcaabay Saleebaan Xaglatoosiye, hadana Saleebaan wuu iska diiday wasiirnimadaa, oo wuxuu ka doorbiday in uu Puntland ka soo horjeesto, oo uu ku booriyo beeshiisa in ay iskaga baxaan Puntland!! Si kastaba ha
Ahaatee Saleebaan Xaglatoosiye wuu ku gacan saydhay, talooyinkii ay u soo jeediyeen siyaasiyiinta iyo waxgaradka Xisbiga Kulmiye, ee iyagu u dhuun dalool siyaasada iyo waaqaca Somaliland! Hadaba Saleebaan Xaglatoosiye oo si diiran loogu soo dhowayay aadna loogu kool kooliyay Somaliland, ka dib markii uu u soo diga rogtay, waxa aad la
Yaab u noqotay, in uu kool koolintii reer Somaliland rumaystay, oo naftiisiiba ilaabay, isuna qaatay in uu yahay Hogaamiyaha deegaanada SSC!! Waayo wuxuu ololihiisii xudun uga dhigay, oo uu shacabka Somaliland u sheegaayay, in hadii isaga la doorto uu midaynaayo Somaliland!! Oo uu deegaanada SSC ku soo daraayo Somaliland!! Min ayn
Laka haadaa?!! Tanu waxay I xusuusisay sheekadii dhex martay Fircoon iyo wasiirkiisii Haamaan, Haamaan wuxuu ahaa ninkii dadka beenta u sheegi jiray, ee ka dhaadhicin jiray in uu Fircoon yahay Ilaah waxna dila waxna noolaya! Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa waxaa Haamaan u tidmid Islaan ay Ceesaan ay kelideed lahayd ka dhimatay,
Waxayna ku tidhi Fircoon ii gee, ha ii soo noolayo Ceesaanta ee! Haamaan wuxuu ku yidhi islaantii: Fircoon wuu hurdaa oo lama kiciyo Ilaaha si aanu inoogu cadhoon, ee orodoo iska tag anigaa Ceesaan kale kuu keenayee, ka dib markii ay is arkeen Fircoon buu isaga oo raba in uu ka qosliyo, wuxuu u sheegay sheekadii Islaanta, bal se Fircoon oo
Is ilaabayba oo isuba rumaystay in uu Ilaah yahay, baa intuu soo booday yidhi: Alla war maxaad ii kicin wayday, oo iigu sheegi wayday, aan u soo noolayo Ceesaanteeda ee!! Haamaan oo yaaban baa ku yidhi Faroon: ma anigana Fircoonow?!! Oo macnaheedu yahay, war ma waxad rumaystay beentii aan kaa fidiyay, oo anigii baad ba maanta iila
Timi in aad Ilaah tahay?!! Hada jawaabta ay Xisbiga Kulmiye siiyeen Xaglatoosiye waa taas!! Intaanu wax midayn horta, waxa ka horaysa isagu wax ma ka yahay deegaanadaas?!! Hal mar baa weligii Urur yar, oo la odhan jiray Hogaanka SSC, looga dhigay madax, taana waxa ka dambayay oo dadka ku khasbay Garaad Jaamac Garaad
Cali, waana lagu kala qaybsamay, shacabka deegaanadaas iyo waxgaradkoodu intooda badan way ka soo horjeesteen, Ururkaasuna xaafad Buuhoodle ka mid ah maahee, meel kale kama shaqayn! Markii shacabka deegaanadaasu isugu tageen Taleexna oo maamulkii Khaatumo lagu dhisay, Saleebaan waa joogay bal se cidina ma dooran, oo
Madax kale ayaa halkaa lagu doortay, cadhadii uu ka qaadayna, waa tan sababtay in uu Somaliland u soo diga rogto!! Marka wa ayo shacabka uu soo xera gelinaayaa, oo uu Somaliland ku soo biiranaayo?!! Si kastaba ha ahaatee Muuse Biixi oo ka mid ah masuulinta sar sare iyo budhigeenada Somaliland, oo uu ku soo dhex jiray, masuul
Muhiim ahna ka ahaa ilaa xiligii SNM, hadana ah gudoomiyaha xisbiga Kulmiye, iyo murashaxa madaxwaynanimo ee xisbigaas, oo uu waqti aad u dheer u soo sabray, oo sugaayay, ma aqbali karo in uu Xaglatoosiye hankiisa iyo mustaqbalkiisa god madaw ku rido, sidaas darteed ugu dambayntii wuxuu goostay, oo shaaciyay, in aanu Xaglatoosiye u
Dooranayn ku-xigeen, ee bal uu ka dhiganaayo oo ku taageeraayo C/Raxmaan Saylici. Taasu marka waxay kaga cadhaysiisay in badan oo shacabka Somaliland ee aan xogoogalka ahayn ah, waxana arinta sii buun buunshay masuuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka, oo iyaga aanay ka ahayn Xaglatoosiye jecayl, ee bal in ay ku
Xumayaan, oo dadka u bahala geliyaan xisbiga Kulmiye! Waa siyaasada tartanka iyo is reeb reebka xisbiyada uun. Hadaba Muuse Biixi oo arintan meel fagaare oo warbaahintu tebinayso lagu waydiiyay, waxay arintiisu ahayd laba daran mid dooro, in uu Xaglatoosiye doorto, oo ay isla dhacaan marka doorashadu timaado, iyo in uu qanciyo
Shacabka caadifadaysan ee aan xogoogaalka ahayn, oo u sheego arimo in badan been looga sheegi jiray, oo ku saabsan deeganada uu Saleebaan Xaglatoosiye ka soo jeedo, iyo xaqiiqada miisaan la’aanta Isxambaarada ee uu Saleebaan Xaglatoosiye ka midka yahay!! Wuxuuna Muuse Biixi doortay tan dambe, jawaabtiisuna waxay ahayd sidatan oo aad
Cajalada qoraalkan la socota ka arki doontaan, (halkan ka daawo cajalada oo dib loo habayay, laguna soo min guuriyo arimo badan oo isku xidhan), wuxuu yidhi Muuse Biixi: “ waa arin wanaagsan in lays waydiiyo maxaa deegaanada SSC cid ka soo jeeda marna loogu dooran waayay madaxwayne ku-xigeenka Somaliland?! Waan idin la qabaa
Muuqaalka maamulkeenuna sidaas ayuu ku qurux badan yahay, hase yeeshee dhibtu waxay tahay, shacabka goboladaasu waxay ku dhacdayba kama qayb galaan doorashooyinka Somaliland, sidaas darteed hadaanu u doorano madaxwayne ku-xigeen qof deegaanadaas ka soo jeeda, dadka reer Awdal ee Xisbiga Kulmiye taageera, ayaa
Nooga wareegaaya xisbiyada kale, oo u codaynaaya, qofka ka soo jeeda deegaanada SSCna ma wato taageerayaal codkoodna na siinaaya sidaan hada soo xusay, taasuna waxay keenaysaa in codadka doorashada nalaga badsado, oo nalaga helo doorashada, marka adeerayaal baqdin baa noo gaynaysa in aanu deegaanada galbeedka ka soo
Xulano madaxwayne ku-xigeenka!!” Muuse Biixi runta ayuu ku raftay, oo ka sheegay qadiyadan! Hadalkiisu wuxuu ahaa xaqiiqa ay Dacar ka qadhaadhahay sheegisteedu, bal se ay laabud tahay in uu sheegaa! Si uu u qanciyo shacabka Somaliland ee caadifadaysan, una badbaadiyo mustaqbalkiisa madaxwaynanimo ee uu waqtiga aadka u dheer
Sugaayay! Anigu waxan aad xogoogaal ugu ahay, iyada oo uu maamulka Somaliland ka jiro magaalada Ceerigaabo hadana doorashooyinka ka dhaca, waxad arkaysaa marka la codaynaayo, in magaalada dhinacna laga codaynaayo, oo daabuuro iyo hawla aad u badan ka soconayaan, dadkuna hawshaysan yihiin, dhinaca kalena aanba laga ogayn wax
Doorasho ah, oo ay dadku nolol maalmeedkoodii iyo hawlahoodii caadiga ahaa iska wataan!! Muuse Biixi wuxuu hadalkiisa ku beeniyay dhamaan hadaladii ay masuuliinta Somaliland shacabka deegaanadaa ka sheegi jireen, sida in ay qayb ka yihiin Somaliland, oo Burco 1991 laysku raacay sidaas! Iyo in Afti Somaliland loo qaaday, ay shacabka
Woqooyigu ugu codayeen 97% !!! xagee tiradaasu ka timid hadaanuba shacabka deegaanada SSC codayn?!! Weliba waxaan ugu dari lahaa Muuse Biixi, in berigaa la yidhi Aftidaas baa la qaaday Laascaanood, Xudun, Yagoori iyo meelo badan oo ay hada joogto Somaliland, berigaas ma ay haysan, oo maba tegi karayn, iska daa cod bixin iyo
Aftiyoo!! Hadalka Muuse Biixi wuxuu u cadaynayaa shacabka Somaliland, in aanay Isxambaaradu metelin deegaanada SSC, bal se lagaga been abuurto shacabka deegaanadaas, oo uun loo haysto in loo tuso caalamka in ay deegaanadaasu Somaliland ka mid yihiin!! Sida tusaale ahaan marka xubno ka mid ah lagu daro wufuud iyo ergooyin
Somaliland uga qayb gelaysa shirar caalami ah, ama wadahadalada dowlada federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland!! Muuse Biixi hadalkiisaa wuxuu ku ayiday hadalkii waraysiga ahaa, ee uu Garaad Saleebaan Garaad Maxamed siiyay idaacada BBC da galabnimadii 18 May 1991 kii, isaga oo ku sheegay waraysigaa: “anagu waxaanu
Burco u tagnay shir nabadaynta beelaha lagaga wada hadlaayay, arinta la sheegaayo ee gooni isu-taagna, waxba kama ogin, oo cidna kama aanu wadahadalin! Cida ku doodaysana iyaga ayay arintaasu ku gaar tahay!!” hadalkaa Garaad Saleebaan ilaa maantadaa aan joogno masuuliinta Somaliland jawaab kama bixin, aan ka ahayn inay
Iska indha tiraan, oo dhegaha ka furaystaan!! Garaad Saleebaan maaha nin hadalkiisa layska indha tiro ama dhegaha laga furaysto, oo waxaan jirin laga soo qaado! Hubaalna waxa ah in ugu dambaynta hadalkiisii uun laysugu soo wada noqonaayo!! Sida hadaba muuqata oo wadahadaladii dowlada federaalka Soomaaliya iyo Somaliland qaab oday
Dhaqameed loogu bedelay! Shir deegaanada SSC ay beesha Caalamku ugu qabanayso magaalada Nayroobi ee dalka Kiinyana, waa loo diiday in wax siyaasiyiin ah oo maamulada ka socdaa ka soo qayb galaan sida Khaatumo, Somaliland, Puntland iwm, bes waxa loo ogol yahay odayada dhaqanka iyo waxgaradka ay iyagu wataan!! Taasu waxay
Cadaynaysa sida ay beesha caalamku qaatiga uga joogsatay, oo ay hada aad uga soo horjeesteen beenta siyaasiyiinta Somalida, oo ay mudo shan iyo labaatan sano ah waxba ku kala socon waayeen!! Siyaasiyiinta Somaalidu waxay xalaalaysteen dhamaan wixii Allaah tacaalaa inaga xarimay, oo ay beentu ka mid tahay, waxay rabaan wax walba inay
Sharci daro, dulmi, cadaalad daro, ku been abuursho iwm ku marsiistaan, iyaga oo aan biyo u kabanayn in ay rabitaankooda guracan, ee sharci darada iyo cadaalad darad ku marsiistaan dhiig ay ku daadiyaan, oo sidaan ka warqabno wax badan dhacday, bal maalin kasta iyo bil kastaba dhacda!!! Si kastaba ha ahaatee sidaan ka wada war qabno
Saleebaan Xaglatoosiye doorashadii xisbiga Kulmiye wuu galay, wuuna ku guul daraystay sidii awelba la filaayay, hadaba in kasta oo uu sheegay in uu aqbalay in tartankii lagaga guulaystay, laakiin sida ka muuqatay hadalkii uu goobtaa ka jeediyay, waxaad ka dareemaysaa in aanu aqbalin in tartankii lagaga guulaystay, waana mid
Caado u ahayd weligiiba, Saleebaan Xaglatoosiye, bal se manta ma hadhin meel uu Somaliland uga diga rogtaa!! Saleebaan wuxuu ka abaal dhacay madaxwayne Siilaanyo, oo soo dhowaystay isaga cidla taagan, isaga oo aan waxba ku soo kordhin Somaliland iyo madaxwayne Siilaanyo toona!! Waana sidii uu horayba uga abaal dhacay Graad Jaamac
Garaad Cali iyo madaxwaynihii hore ee Puntland Dr. C/Raxmaan Faroole!! Soomaali aad bay isugu sii daysay siyaasi beenaale ah, oo aan waxba xeerinayn, hadbana dhinac u socda, oo wax walba doonaayo in uu been iyo dhiig uu daadsho ku marsiisto, marka shacabka waxa la gudboon maanta in ay la qaataan mowqifkaa ay beesha Caalamku ka qaadatay oo kale, bal in waxa hadhay dal iyo dadba loo badbaadiyo.
Hadalkii Muuse Biixi, SSC, Video, Xisbiga Kulmiye
Arrag Sawiro:- Muuqaalo Laga Soo Qaaday Meydadkii Maanta Laga Aruuriyay Wadooyinka Gaalkacayo Daawo Sawiro:- Dooni ay Qafaasheen Budhcad badeedu oo Xoog Looga Soo Furtay
Prof. Axmed I. Samatar Hambalyo Guddida Waqooyiga Ameerica by Samia Fisher